Choputa osisi, nke Philipp Blom dere
Ojiji nke okwu a bụ "egwuregwu" na -egosipụta nke ọma ọhụụ ụwa anyị dị ka ihe na -adịchaghị adị. N'ihi na ihe niile bụ egwuregwu, anyị bụ ndị bi nwa oge ebe a, yabụ anyị enweghị ike were ihe ọ bụla kpọrọ ihe. Naanị, ọ bụ ihe nwute, usoro okwu ahụ na-egosikwa na echiche egwuregwu nwere ọtụtụ ihe egwuregwu (ngwakọta nke iocum na ludus-ludere) iji soro akụkụ ntụrụndụ mee ihe.
Yabụ, ebe anyị matara agụụ Latin maka achịcha, egwuregwu na mmanya, anyị na-ejedebe taa na ludo-patía nke na-ahụghị ọdachi na-abịara anyị nke ukwuu, n'ihi na ihe dị mkpa bụ na, egwuregwu ahụ, na -eme ka anyị gafere ngwa ngwa n'ime ụwa a.
Nsogbu a bụ, ndị na -abịa dị ka akụ na -echefughị ​​echefu echefu aja aja anyị nwere ike iri na onwe anyị, dịka anyị na -amalite ịhụ taa. Ngwakọta n'etiti ọhụụ ndị abụrịrị Marx ya na ụdị ndị ọzọ nke echiche mmekọrịta ọha na eze zuru oke site na echiche nke emeri emerila ugbu a n'akụkụ ndị na -azụ ahịa. Ihe ndị a niile na -akọwapụta n'ọhụụ nyocha nke mmalite nke ụwa karịa nke mmepeanya anyị iji nye nkọwa dị n'etiti ụwa anyị dị ka ebe nwere onwe ya yana ebe obibi ahaziri maka mkpa anyị.
N'ime akwụkwọ ọhụrụ a Filip Blom ọ na -enyocha ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ihe ọ na -ahụ adịghị mma nke ukwuu: anyị na -eche abis n'ọtụtụ ihu, nke ikekwe ihe kacha emenye ụjọ na ịpị metụtara mgbanwe ihu igwe. Iji chọpụta ka aga-esi aga n'ihu, Blom na-enyocha etu otu dị iche iche siri meghachi omume n'ihe akpọrọ "Little Ice Age" nke narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ, na nkwubi okwu ya bụ na ọ bụghị ha niile maara ma ọ bụ nwee ike imeghari nke ọma na mgbanwe ihu igwe.
Anyị nwekwara ihu ndị ọzọ mepere emepe: ọha ndị na -azụ ahịa na -ebute enweghị ahaghị nhata, klaasị etiti na -agbasasị, robots na ọgụgụ isi na -eme ka ọtụtụ ọrụ ghara ịdị. Na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na -akwado ikeketeorie na -enweghị ihe mgbochi na -achọ ịgbachitere ihe ùgwù ha na -enweta ọnọdụ, na populism nwere anya ọchịchị na -apụta, ebe ezi ọchịchị onye kwuo uche ya na -agbakọ ...
Ụwa nke si na Enlightenment - nnwere onwe, ikpe ziri ezi, ọchịchị onye kwuo uche ya - nọ n'ihe egwu. Ozi ọma ahụ, Blom na -agwa anyị, bụ na anyị ka nwere oge iji wezuga ihe ọjọọ ndị a niile. Akwụkwọ a nwere obi ike ma dị mkpa bụ iji nyere aka chọpụta ha ma nye ngwaọrụ iji meghachi omume, iji duzie ụzọ tupu anyị akụwa.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ ugbu a «Gịnị nọ n'ihe egwu, nke Philip Blom, ebe a:
Tags Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Filip Blom
1 kwuru na "The Stakes, nke Philipp Blom dere"
16/09/2021 na 7:46 mgbede
Biko, kedụ aha izizi? Daalụ